ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ကွာလာလမ်ပူမြို့ အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nokoloz Apkhazaua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ကွာလာလမ်ပူမြို့ အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nokoloz Apkhazaua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည်ကွာလာလမ်ပူမြို့ အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nokoloz Apkhazaua အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဧည့်တွေ့ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်ကျော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက်ကြပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံသည် ထင်ရှားသော ဆွဲဆောင်မှုများရှိသော ခရီးစဉ်ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်စွန်းမှ တောင်ဘက်ဖျားအထိသွားရောက် လည်ပတ်စရာ များပြားစွာ ရှိသည့်အပြင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်ပါကြောင်း၊ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှခရီးသွား ဧည့်သည်များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။